Mayelana NATHI - UHenan Pijiang Technology Development Co, Ltd.
UHenan Pijiang Technology Development Co, Ltd. ngumkhiqizi ochwepheshe wemishini yokuphuza ubhiya.Ngenxa yokukhiqiza enkulu kunazo zonke eChina, inkampani yePijiang yasungulwa ngonyaka ka-2011. Imishini yokwenziwa kabusha enwetshiwe enamalungelo ezimele okuphathelene nempahla iqinisekisa ukuzinza kwekhwalithi yobhiya, ukunambitheka okukhulu, ukusebenza kahle okuphezulu futhi kusindisa izindleko zabasebenzi.
Silandela inqubomgomo "yokumangalisa, eyengqondo, enobumbano nobumbano", ehlala ithuthukisa futhi isungula, ilandela inqubomgomo yokuphatha "esekwe ngokwethembekile", "ikhasimende kuqala", "ikhwalithi yokuqala" ne "service ephelele", ngokuqhubekayo ibhula ikhasimende funa, kuthatha imakethe njengesiqondiso, ukulwela inhloso ephezulu.
Amandla e-R & D yethu
Sine-design ehlanganisiwe, ucwaningo, ukuthuthukiswa, ukukhiqizwa, ukuthengisa, ukufakwa, ukuthunyelwa, kanye nensizakalo ye-after-sale, ngokuqinile ngohlelo lwekhwalithi ye-ISO9000. Usayizi wethu wasefektri ongaphezu kwamamitha skwele ayi-100000, unabasebenzi abangaphezu kuka-500 abafaka iziqu ezingaphezu kwe-120 iziqu kanye nabathweswe iziqu zasekolishi, kanye nabonjiniyela nochwepheshe abangaphezu kwe-20. Inkampani isebenzisa cishe i-5% yemali yayo yokuthengisa kwi-R&D njalo ngonyaka. Ukuncika ekhonweni labo lemisebenzi emisha, futhi njalo bathuthukisa ubuchwepheshe babo, ukuqamba, futhi manje kunenqwaba yamalungelo obunikazi, njengokuqamba kwamalungelo obunikazi, imodeli yokusebenza patent.Fally, sisebenzisa uchungechunge lwemishini ethuthukile njenge-OTC Welding, umshini wokusika i-laser , umshini wokusika we-gantry, i-othomathikhi yokwenza imvelo, njll.